Zavatra Mila Ampianarina ny Ankizy: Mifehy Tena
Mifohaza! | No. 2 2019
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bassa (Cameroun) Bengali Bichlamar Boligara Boulou Catalan Cebuano Changana (Mozambika) Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Cinyanja Danoà Douala Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Frantsay Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kekchi Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Letonianina Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mbunda Mongol Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndebele (Zimbabwe) Ngangela Norvezianina Nyaneka Nyungwe Népali Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Bolivia) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tlapanèque Tok Pisin Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Mahay mifehy tena ny olona iray raha:
Mahafehy ny faniriany sy ny fihetseham-pony
Manao izay tokony hatao, na dia tsy tiany aza ilay izy
Mitady izay hahasoa ny hafa
Raha mahay mifehy tena ny ankizy iray dia tsy ho voatarika hanao ratsy, na dia hoatran’ny hoe mahafinaritra aza ilay izy. Raha tsy mahay mifehy tena kosa izy, dia mety...
ho mora kivy
hifoka sigara na rongony, na hisotro toaka be
tsy hahatandrina ny sakafo hohaniny
Hita tamin’ny fikarohana iray fa misy vokany tsara rehefa mahay mifehy tena ny ankizy. Ho tia manara-dalàna, ohatra, izy rehefa lehibe, ary tsy dia hanana olana ara-bola na ara-pahasalamana. Izany no nahatonga ny Profesora Angela Duckworth hilaza hoe: “Tsy misy vokany ratsy mihitsy ny hoe mahafehy tena.”
AHOANA NO HAMPIANARANA AZY?
Mahaiza mandà ary aza miovaova hevitra.
TORO LALANA: “Aoka ny teninareo rehefa Eny dia Eny, rehefa Tsia dia Tsia.”—Matio 5:37.
Mety hila vaniny ny zanakao rehefa tsy arahina ny sitrapony. Mety hanao an’izany izy na dia eny imason’olona aza. Raha amin’izay ianao no milefitra, dia lasa mieritreritra izy hoe afaka mahazo an’izay angatahiny izy rehefa mila vaniny.
Raha tsy miovaova hevitra kosa ianao rehefa mandà, dia ho hainy hoe tsy voatery ho azo foana izay zavatra irina. “Sambatra kokoa aza ny olona manaiky an’izany”, araka ny tenin’ny Pr. David Walsh. ‘Tsy manampy ny zanatsika isika, raha miteny aminy hoe ho azony foana izay rehetra iriny.’ *
Raha mahay mandà ianao, ka tsy manome an’izay rehetra angatahin’ny zanakao, dia hahay hifehy tena kokoa izy rehefa lehibe. Tsy ho voatarika hifoka zava-mahadomelina izy, na hanao firaisana alohan’ny fanambadiana, na hanao zava-dratsy hafa.
Ampio izy hahatakatra hoe inona no ho vokatry ny zavatra ataony.
TORO LALANA: “Izay afafin’ny olona ihany no hojinjainy.”—Galatianina 6:7.
Ataovy azon’ny zanakao hoe misy vokany foana ny zavatra ataony, ary ho ratsy ny vokany raha tsy mahafehy tena izy. Hihatakataka aminy, ohatra, ny olona raha tsy mahafehy ny hatezerany izy. Ho tian’ny olona kosa izy raha mahafehy ny hatezerany, ka mihaino tsara aloha fa tsy manapaka tenin’olona. Ataovy tsapany hoe ho sambatra izy raha mahay mifehy tena.
Ampio izy hahita hoe inona no zava-dehibe kokoa.
TORO LALANA: ‘Fantaro tsara izay zava-dehibe kokoa.’—Filipianina 1:10.
Miezaka mafy tsy hanao ratsy ny olona mahafehy tena. Tsy izay ihany anefa. Manao izay tokony hatao koa izy, na dia tsy tiany aza izany. Mila ianaran’ny zanakao hoe inona no zava-dehibe kokoa, dia izay no tokony hataony voalohany. Rehefa vita, ohatra, ny devoara vao mandeha milalao.
Miezaha ho modely.
TORO LALANA: “Modely no nomeko anareo, mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo.”—Jaona 13:15.
Hitan’ny zanakao hoe ahoana ny fihetsikao rehefa misy zavatra mahasosotra anao. Miezaha àry ho modely. Ho hitany amin’izay hoe tsara ny vokany rehefa mahafehy tena ny olona. Inona àry no tokony hataonao raha manao zavatra tsy mety ny zanakao? Hisafoaka ve ianao sa hiezaka ho tony?
^ feh. 20 Nalaina tao amin’ilay boky hoe Aza Mampihanta Zanaka: Fa Nahoana ary Amin’ny Fomba Ahoana? (anglisy)
AMPIANARO IZY DIENY IZAO
Raha mahay mandà ianao ka tsy manome an’izay rehetra angatahin’ny zanakao, dia hahay hifehy tena kokoa izy rehefa lehibe. Tsy ho voatarika hifoka zava-mahadomelina izy, na hanao zava-dratsy hafa
Miezaha ho Modely
Hitan’ny zanako ve hoe mahafehy tena aho rehefa misy mahasosotra ahy?
Efa nohazavaiko tamin’ny zanako ve hoe maninona aho no miezaka ny ho tony rehefa misy olana?
Ahoana no fahitan’ny zanako ahy: Olona taitaitra sy mora tezitra ve? Sa olona tony sy mahay mifehy tena?
Izao no Nataonay:
“Noteneninay ny zanakay vavy hoe tsy maninona izy raha tezitra, fa tsy tokony hanorisory ny hafa fotsiny. Rehefa tsy nahafehy ny hatezerany izy, dia tsy navelanay niaraka tamin’ny hafa raha tsy efa tony tsara.”—Theresa.
“Manan-janaka mianadahy izahay. Noderainay foana ry zareo rehefa nahavita zavatra tsara. Noderainay, ohatra, ry zareo rehefa niatrika olana nefa niezaka ny ho tony sy nifehy tena.”—Wayne.
Ahoana raha mila vaniny sy midongy be ny zanakao?
Hizara Hizara Mifehy Tena
Tsy Mora Kivy
Miana-javatra avy Amin’ny Olon-dehibe
Manana Toetra Tsara
Afaka Manampy Anao Izy Io
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Zavatra Enina Mila Ampianarina ny Ankizy
Raki-peo Fandikana raki-peo MIFOHAZA! Zavatra Enina Mila Ampianarina ny Ankizy
Hizara Hizara MIFOHAZA! Zavatra Enina Mila Ampianarina ny Ankizy
Zavatra Enina Mila Ampianarina ny Ankizy
MIFOHAZA! Zavatra Enina Mila Ampianarina ny Ankizy